18 Eyinom akyi no, ofii Atene kɔɔ Korinto. 2 Na ohuu Yudani bi a wɔfrɛ no Akwila,+ Pontoni bi a na ofi Italia+ bae nkyɛe, ne ne yere Priskila, efisɛ na Klaudio+ ahyɛ sɛ Yudafo nyinaa mfi Roma. Enti ɔkɔɔ wɔn nkyɛn 3 na esiane sɛ na ɔne wɔn yɛ adwuma koro nti, ɔtenaa wɔn fie yɛɛ adwuma,+ efisɛ na wɔyɛ ntamadanyɛfo. 4 Nanso, homeda biara na ɔka asɛm wɔ hyiadan+ mu ma Yudafo ne Helafo gye di. 5 Afei bere a Silas+ ne Timoteo+ nyinaa fii Makedonia bedui no, Paulo de ne bere nyinaa kaa asɛm no, na odii Yudafo adanse kyerɛe sɛ Yesu ne Kristo no.+ 6 Bere a wɔne no dii asi na wɔkasa tiaa no+ no, ɔporoporow n’atade mu+ ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo mogya+ ngu mo ara mo atifi. Me de, me ho afi.+ Efi nnɛ merekɔ amanaman mufo nkyɛn.”+ 7 Enti ofii hɔ kɔɔ ɔbarima bi a ɔsom Onyankopɔn a ne fie ne hyiadan no bɔ ho a wɔfrɛ no Titio Yusto fie. 8 Na Krispo+ a ɔyɛ hyiadan mu panyin no gyee Awurade dii, na ne fiefo nyinaa nso yɛɛ saa ara. Na Korintofo a wɔtee no mu pii gye dii ma wɔbɔɔ wɔn asu. 9 Afei, anadwo no Awurade ka kyerɛɛ Paulo+ wɔ anisoadehu mu sɛ: “Nsuro, kɔ so kasa, nka w’ano ntom, 10 efisɛ meka wo ho+ na obiara ntumi mfa ne nsa nka wo nyɛ wo bɔne biara; na mewɔ nnipa pii wɔ kurow yi mu.” 11 Enti ɔtenaa hɔ afe ne asram asia kyerɛkyerɛɛ wɔn Onyankopɔn asɛm. 12 Afei bere a Galio yɛ Akaia amrado+ no, Yudafo no yɛɛ biako sɔre tiaa Paulo de no kɔɔ atemmu agua no anim+ 13 kɔkae sɛ: “Saa onipa yi dan nkurɔfo adwene+ ma wɔfa ɔkwan foforo so som Onyankopɔn a ɛne mmara no nhyia.” 14 Bere a Paulo yɛe sɛ ɔrebue n’ano no, Galio ka kyerɛɛ Yudafo no sɛ: “O Yudafo, sɛ ɛyɛ bɔne anaa amumɔyɛde bi a, anka mɛte mo ase. 15 Na mmom sɛ ɛyɛ nsɛm ne edin+ ne mo mmara+ ho akyinnyegye de a, ɛnde mo ankasa monhwɛ nka. Mempɛ sɛ mɛyɛ nsɛm yi ho ɔtemmufo.” 16 Ɛnna ɔpam wɔn fii atemmu agua no anim. 17 Enti wɔn nyinaa tow hyɛɛ Sostene+ a ɔyɛ hyiadan mu panyin no so fii ase hwee no atemmu agua no anim. Nanso Galio anyɛ eyinom ho hwee. 18 Nanso bere a Paulo dii nna kakra kaa ho wɔ hɔ no, ɔne anuanom no dii nkra na ɔde po so hyɛn fii hɔ kɔɔ Siria a Priskila ne Akwila ka ne ho, na oyii ne ti ma ɛkɔɔ fam+ wɔ Kenkrea,+ efisɛ na wahyɛ bɔ. 19 Enti wɔkɔɔ Efeso, na ogyaw wɔn wɔ hɔ; na ɔno de ɔkɔɔ hyiadan+ mu ne Yudafo no kosusuw nsɛm ho. 20 Wɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn kakra de, nanso wampene so, 21 na ɔne wɔn dii nkra+ ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ Yehowa pɛ+ a, mɛba mo nkyɛn bio.” Na ofi Efeso faa po so 22 kɔɔ Kaesarea. Na okokyiaa asafo no, na ɔtoaa so kɔɔ Antiokia. 23 Bere a ɔtenaa hɔ kakra no, ofii hɔ tutuu akwan faa Galatia+ ne Frigia+ nsase so hyehyɛɛ asuafo no nyinaa den.+ 24 Afei Yudani bi a wɔfrɛ no Apolo+ a ofi Aleksandria, ɔbarima a n’ano atew, baa Efeso, na na onim Kyerɛwnsɛm no mu yiye.+ 25 Ná wɔakyerɛkyerɛ no Yehowa kwan so, na esiane sɛ na honhom ahyɛ no mã+ nti, ɔkaa Yesu ho asɛm kyerɛkyerɛɛ mu pɛpɛɛpɛ, nanso na Yohane asubɔ+ no nkutoo na onim. 26 Na onipa yi fii ase de akokoduru kasae wɔ hyiadan no mu. Bere a Priskila ne Akwila+ tee nea ɔreka no, wɔfaa no kaa wɔn ho kyerɛkyerɛɛ Onyankopɔn akwan no mu pefee kyerɛɛ no. 27 Afei, esiane sɛ na ɔpɛ sɛ otwa kɔ Akaia nti, anuanom kyerɛw asuafo no srɛɛ wɔn sɛ wonnye no fɛw so. Enti bere a oduu hɔ no, ɔboaa+ wɔn a wɔnam Onyankopɔn adom+ so agye adi no paa; 28 ɔde nnam daa no adi pefee wɔ baguam sɛ Yudafo no afom kwan, na ɔde Kyerɛwnsɛm+ no kyerɛe sɛ Yesu ne Kristo+ no.